एमसिसी उपाध्यक्ष किन आउँदै छिन् नेपाल ? – Classic Khabar
September 2, 2021 180
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन्। ५० करोड अमेरिकी डलरको उक्त परियोजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् २०१७ मै सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकिरहेका बेला उपाध्यक्ष सुमार सेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउन लागेकी हुन्।
यो परियोजना कार्यान्वयनमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस तयार भए पनि गठबन्धनभित्रकै नेकपा माओवादी केन्द्र सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय परिमार्जन नगरी कार्यान्वन गर्न नहुने पक्षमा छ। ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले एमसिसी हुबहु कार्यान्वयन गर्न नहुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। खनाल अहिले एमाले फुटेर बनेको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० मा छन्।
सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यो विषयमा सबैको चासो भएकाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पर्याप्त छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एकतर्फी रुपमा उक्त परियोजना कार्यान्वनका लागि अघि बढाएमा गठबन्धनभित्र विवाद चर्किने देखिन्छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
Prevपोखरामा पक्राउ परेकी यी महिला, जस्ले केटाहरुसंग….
Nextसभामुखविरुद्ध ओली सर्वोच्चमा
माइतीले दुवै हात नहुने संग किन बिवाह गरेको ? छोडेर आइज त्यसले कसरि पाल्छ तर म उसलाई छोड्न सक्दिन बरु मर्छु भन्छिन् एलिना (भिडियो सहित)
८ दीनमा भेटीयो सेतिमा टीकटक बनाउदा खसेकी पवित्रालाई ! यस्तो अबस्थामा पानिमा तैरीरहेपछि….